Tsvaga iyo Fuciño do Porco muGalicia | Kufamba Nhau
Fuciño do Porco muGalicia
Nezita iri risingazivikanwe a nzvimbo iri pamhenderekedzo yeGalician, muMariña Lucense. Nzvimbo iyo kusvika nguva pfupi yadarika yakanga isingazivikanwe nevakawanda, poindi yaingonakidzwa nevagari vemo chete asi kuti mumakore achangopfuura yakave nzvimbo yekushanya nekuda kwekunaka kwayo kukuru, yakasarudzika zvachose. Iyo Fuciño do Porco inoshandurwa seNguruve Snout ndeimwe yemakona egungwa reGalician raunodanana naro.
Rini shanyira Galicia pane zvinhu zvatisingakwanise kupotsa uye nzvimbo dzemahombekombe egungwa ndechimwe chezvinhu izvo. Iyi nzvimbo iri pamhenderekedzo yegungwa inotarisana neGungwa reCantabrian, munzvimbo inozivikanwa seMariña Lucense kuchamhembe kwenharaunda. Asi isu tichaenda kuona zvishoma zvishoma zveiyi yakanaka poindi iyo zuva rega rega inounganidza kumwe kushanya.
1 Ungasvika sei kuFuciño do Porco
3 Gadzira nzira
4 Pedyo neFuciño do Porco
Ungasvika sei kuFuciño do Porco
Kusvika pano kunogona kunanga, sezvo pasina nzira dzakawanda. Kubva As As Pontes de García Rodriguez tinogona kutora iyo LU-540 mugwagwa kana LU-862 kubva kuVicedo. Idzo idzo nzira diki asi dzinotiendesa kwatinoda kuenda. Iyo chaiyo poindi iyo yatinoona mumifananidzo inongowanikwa chete netsoka, kunyangwe nzira yacho isinganyanyoda kana kureba kwazvo, saka tinogona kuzviita nevana nezvipfuyo zvisina dambudziko. Iwe unofanirwa kusiya mota munzvimbo yekupaka yakaratidzirwa uye unongonakidzwa neiyo nzira yekukwira iyo inotitorera kunzvimbo ino.
Kunyangwe kunyangwe pamamepu tichigona kuona ino nzvimbo yakatumidzwa saizvozvi, chokwadi ndechekuti zita rayo chairo ndiPunta Socastro. Iyi nharaunda yakatanga kuve nenzira iyo nhasi inogona kuvharwa pasina matambudziko nekuda kwezvikonzero zvebasa, sezvo yaive nzira iyo mahunyanzvi aifanira kugadzirisa redhiyo beacon pakupera kwekapa. Nekudaro, makore mashoma apfuura uye nekutenda kusimba reInternet kutsvaga nzvimbo nyowani, zvimwe zvinyorwa zvinoisa nzvimbo yekutarisisa panzvimbo yekurota iyi pamhenderekedzo yeLugo. Vhura munguva pfupi nzvimbo yakava nzira iyo munhu wese aida kuita, kuti unakirwe nehunhu hwayo hwesango, kutora kufamba kwakasarudzika kana kutora mamwe mapikicha akanaka pasocial network. Munguva pfupi yadarika vakagadzirira nzira zvirinani nenjanji kudzivisa chero tsaona, nekuti nzira inomhanya nemunzvimbo dzemawere dzinogona kuita hunyengeri kana mamiriro ekunze asina kunaka.
Chimwe chezvinhu chinonyanya kunakidzwa ndiyo nzira huru kuburikidza neiyi inoshamisa nzira. Panzvimbo ino, sezvo mota dzisingasvike, iwe unongonzwa gungwa, mhepo uye tsoka dzako. Nzira yacho yakapusa uye yakachengeteka nhasi. Ehezve, kune nzvimbo kwaunofanirwa kukwira masitepisi, uchiisa fomu yako yemuviri kuyedza. Iko kuedza kwakakosha kuti tikwanise kusvika kune cape, nzvimbo yatinogona kunakidzwa nekukura kwegungwa. Iyo ingangoita 3.7 mamaira, chimwe chinhu chingatitorere maawa maviri kumashure nekudzoka kana isu tikatora zviri nyore, nekuti hazvishamise. Iyo nharaunda ichatisiya isu tichishamiswa nerunako rwayo. Iwe unofanirwa kuziva kuti mukati memwedzi waChikunguru naNyamavhuvhu nekuda kwekuwedzera kwekushanya, unofanirwa kufanogadzirira pamberi.
Pedyo neFuciño do Porco
Rwendo urwu runotitorera anenge maawa maviri, asi kana tikaenda muzhizha tichine nguva yekuona zvimwe zvinhu padhuze. Pane mahombekombe akati wandei, akadai seAbrela, nemvura uye chikuva chehuni sekuwana. Iri igungwa rakaringana kushandisa zuva, iine masevhisi uye nemvura huru. Tinogona zvakare kuenda kuguta reViveiro, iro rine mahombekombe makuru eCovas.
En Viveiro tinogona kushanyira raimbova guta rakakomberedzwa, ine akati wandei masuo ekupinda ayo matatu chete asara nhasi. Inonyanya kuzivikanwa ndeyeyaCarlos V, anozivikanwa saPorta do Castelo da Ponte. Vamwe ndivo Porta do Balado naPorta da Vila. Kana isu tiri vanonamata, padyo nekereke yeViveiro tinowana bako reLourdes, kuburitswa kwebako iri uko vanhu vazhinji vanosiya zvipikirwa zvavo, zvinova zvivezwa zvewax zvakagadzirwa kuita zvikumbiro zvavo kuMhandara. Tatova muPaza Meya isu tinogona kukoshesa maparadhiso akajairika zvakajairika mumahombekombe emahombekombe kuchamhembe kweGalicia, pamwe nemufananidzo wedetembi Mufundisi Díaz. Tinogona kuyambuka Mercy Bridge kuti tiwane chimwe chiono cheguta uye tinobatanidza pano nemugwagwa unotitora kuenda kuCovas beach. Kana tichine nguva, tinogona kukwira paMonte de San Roque, kubva patinozove nekuona kunoshamisa kweViveiro. Ikoko isu tichawanawo dzimwe dzinonakidza nzira dzekukwira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » General » Fuciño do Porco muGalicia
Gungwa reSargasso, gungwa risina mahombekombe